अक्टोबर 23, 2016 सेप्टेम्बर 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments Bermuda Triangle, Gopal Bhandari, गोपाल भण्डारी, बर्मुडा ट्रायगंल
के हो बर्मुडा ट्रायगंल ? आउनुहोस यस बारेमा चचा गरौ । आन्ध्र महासागरको पश्चिमी हिस्सामा अवस्थित एक खतरनाक इलाका जसमा पानीको चम्किला धार, प्रकाश र फिज देखिन्छ । आन्ध्र महासागरको यही भागलाई बर्मुडा ट्रायगंल भनिन्छ । यस समुन्द्री भागलाई रहस्यमय त्रिकोण, शैतान सागर, आन्ध्र महासागरको नर्क जस्ता नराम्रा नामले यो ठाउँ चिनिएको छ ।
पछिल्ला १०० वर्षमा यसमा ७५ वटा ठूला जहाज र १०० भन्दा बढी साना पानीजहाज पसेर बिलाइसकेका छन् । यसक्रममा १००० भन्दा धेरै मानिसको ज्यान गइसकेको छ । यसकाे रहस्य अझै पनि रहस्यकाे गर्भ भित्रै र के भनिन्छ भने बर्मुडा ट्रायंगलमा कयाैँ एयरक्राफ्ट र जहाजहरू अत्यन्त रहस्यमय ढंगले परिस्थितिवश गायब भएका छन् ।
हुनत अमेरिकी नौसेनाले बर्मुडा ट्रायंगल जस्ताे कुनै टापु छैन भनेपनि असाधारण तरिकाबाट यहाँ यसता किसिमका घटनाहरू पटक पटक दाेहाेरिरहेका छन् । यसबाट यसकाे अस्तित्व छैन भन्ने अाधार कमजाेर हुन अाउँछ । त्यसाे त समय-समयमा बर्मुडा ट्रायंगलकाे रहस्याेद्घाटन गरिएका कतिपय दाबीहरू पनि बाहिर नअाएका हाेइनन् ।
तर अझै पनि यसकाे पछाडिकाे वास्तविकता खुल्न अाएकाे छैन अर्थात् याे यही हाे र यसै हाे भन्ने खास अाधार छैन । कतिपयका भनाइमा बर्मुडा ट्रायंगल भित्र एउटा बाहिरबाट नदेखिने पिरामिड छ, जसले चुम्बकले झैँ हरेक वस्तुलार्इ अाफूतिर तान्दछ । लगातार जहाजहरू गायब हुन थालेपछि लगभग ५०० वर्षपछि यसलार्इ “डेन्जर रिजन” काे नाम दिइएकाे हाे।
यसका बारेमा के पनि भनिन्छ भने सन् १४९२ मा अमेरिकाकाे यात्राका क्रममा क्रिस्टाेफर कोलम्बसले पनि यस क्षेत्रमा केही चम्केकाे अनुभूति यरेका थिए । जसकाे कारणले काेलम्बसकाे म्याग्नेटिक कम्पास बिग्रेकाे थियाे । यसका अलावा अरू पनि कतिपय यस्ता घटनाहरू भए जसका बारेमा अझैसम्म पनि सारा दुनियाँ अनभिज्ञ छ ।
यस क्रममा त्यस आसपास रहेका सबै बस्तु नष्ट हुन पुग्छन् । वैज्ञानिकका अनुसार बादल बर्मुडा द्वीपको दक्षिणी भागमा पैदा हुने गरेको छ । यो बादलले त्यसपछि करिब २० देखि ५५ माइलको यात्रा तय गर्छ । बर्मुडा ट्रायगंलको रहस्यबारे विश्वमा कयौं तथ्य बाहिर ल्याइएको छ । यस्तै एक सिद्धान्तमा बर्मुडा ट्रायगंलको शक्तिको पछाडि एलियनको हात रहेको दावी गरिएको थियो ।
भर्खरै, कोलोराडो स्टेट यूनिभर्सिटीका मेट्रोलोजिस्ट र्‍यान्डी क्यारभेनीका अनुसार यो बादलले ‘एयर बम’ बनाउने गरेको छ । अर्थात, हावामा बम पड्के जस्तो क्षमता पैदा गर्दछ । समाचार अनुसार र्‍यान्डी क्यारभेनी यस सिद्धान्तको विकास गर्नेहरुको वैज्ञानिकको टीमका सदस्य हुन् । बर्मुडा ट्राएङ्गलमा १७० माइल करिब २७३ किलोमिटर) घन्टाको गतिको हावा रहेको हुन्छ ।
यी बादल र हावा आपसमा मिलेर जब जहाज या हवाईजहाजसँग ठोक्किन्छन् तब तिनलाई तानेर समुद्रको पिँधमा पुर्‍याउँछन् । वैज्ञानिकको दावी अनुसार बर्मुडा ट्रायगंलमा जम्मा हुने शक्ति समुद्रको पानीसँग ठोक्किने गरेको छ । जसबाट सुनामी भन्दा शक्तिशाली अग्लो समुद्री लहर उठ्ने गर्छ । यी लहर आपसमा ठोक्किँदा अझ धेरै शक्ति पैदा हुन्छ ।
थप जानकारीको लागि तलको भिडियो हेर्नुहोला ।
← वास्तुशास्त्र अनुसार पसलहरूको रङ्क
कैयौ जहाजहरु र मानिसहरु निलेको बर्मुडा ट्रायगंलको रहस्य खुल्यो ! →
सेप्टेम्बर 20, 2018 अक्टोबर 15, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0